Fiainana ny karemy :: Haha Paka ny fiainantsika ny fikatsahana mandrakariva ny tsara • AoRaha
Fiainana ny karemy Haha Paka ny fiainantsika ny fikatsahana mandrakariva ny tsara
Mamarana ny Karemy isika ka handeha handinika ny fitiavan’Andriamanitra Ray an’izao tontolo izao, izay namoizany ny zanany, dia i Jesoa Kristy. Izy no nanambara fa « tsy misy manam-pitiavana lehibe kokoa noho ny mahafoy ny ainy ho an’ny sakaizany », Jo 15,13.
Tanterak’i Jesoa tamin’ny an-tsakany sy an-davany ny sitrapon’Andriamanitra Rainy, tamin’ny alalan’ny famonjena antsika. « Tanteraka ny zavatra rehetra, hoy Izy », Jo 19,30. Ary tsarovy fa ny fahafatesan’i Jesoa no mitondra fanavotana sy fiainana. « Koa niara-nalevina taminy tamin’ny batemy hoamin’ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana an’i Kristy tamin’ny maty, tamin’ny voninahitry ny Ray, no andehanantsika amin’ny fiainam-baovao koa » , Rom 6,4.
Ny Karemy no mifarana anio fa ny fiainana miaraka amin’Andriamanitra dia mandritra ny fiainana manontolo mba hahatongavana any an-danitra. Andeha ary hanapa-kevitra isika mba handevina ny fahazarandratsy fanao ka hikatsaka ny tsara mandrakariva mba ho tena Paka ny fiainantsika.
Fankalazana ny fetin’ny paska :: Miova ho lanonana ampitain-davitra ny “Star tour”